अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा एक परिवारद्वारा ५० वर्षिया घरेलु कामदारलाई ८ वर्ष बन्धक र यातना ! - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा एक परिवारद्वारा ५० वर्षिया घरेलु कामदारलाई ८ वर्ष बन्धक र यातना !
Posted by Himalayan Kangaroo | २५ माघ २०७४, बिहीबार ०७:१२ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा एक परिवारले ५० वर्षिया घरेलु कामदारलाई ८ वर्ष बन्धक बनाएर यातना दिएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। अष्ट्रेलियामा बस्ने श्रीलंकन दम्पत्ति कन्दस्मी क्यान्नन र कुमिथिनीले भारतीय महिलालाई नोकरको रुपमा बन्धक बनाएर राखेका हुन् ।
न्युजडटकमका अनुसार, सन् २००७ मा ती महिलालाई श्रीलंकन दम्पत्तिले पर्यटक भिसामा भारतबाट ल्याई आफ्नो घरमा नोकरको रुपमा राख्न थालेका थिए । भिसा अवधि सकिएपछि उनीहरुले ती महिलालाई बन्धक बनाएर तातो पानी खन्याईदिने, कुटपिट गर्ने, चक्कुले शरीरमा घाउ बनाइदिने जस्ता यातना दिने गरेका थिए। अष्ट्रेलिया आएको एक वर्षपछि नै आफ्नो मोबाइल फोन हराएपछि उनले परिवारसंग सम्पर्क समेत गर्न पाएकी थिइनन् ।
हाल यो घटनाको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। ती महिलाका ज्वाईले श्रीलंकन दम्पत्तिले पारिश्रमिकको रुपमा अहिलेसमा ६० हजार भा. रु मात्र दिएको बताएका छन्। उनले ती दम्पत्तिले आफूलाई ” मुद्दा फिर्ता नलिए तेरो सासू मार्दिन्छौँ, मुद्दा फिर्ता लिइस् भने तैले चाहेको रकम दिन्छौं ” भनेको समेत खुलासा गरेका छन् । ती श्रीलंकन दम्पत्तिले अहिले धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
तस्बिरमा : कुमुथिनी क्यान्नन्
Previousनौ बर्षीया बालिकालाई बलत्कार गर्ने युवा पक्राउ
Nextनेपालले टस जितेर आयोजक नामिबियालाई ब्याटिङको निम्तो !
अष्ट्रेलियाबाट आयो जीवन जिउन प्रेरित गर्ने नेपाली म्यूजिक भिडियो
१० पुष २०७३, आईतवार ०५:४१